कम्युनिस्टहरूले बल प्रयोग गरे हामी भिड्न तयार छौं :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
कम्युनिस्टहरूले बल प्रयोग गरे हामी भिड्न तयार छौं
जितजंग बस्नेत, अध्यक्ष, तरुण दल
० तरुण कार्यकर्तालाई कसरी परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
– तरुण दल नेपाली कांग्रेको मेरुदण्ड पनि हो । यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्येक बुथमा ३० जना स्वयंसेवक साथीलाई खटाउँदै छांै । उनीहरूले प्रत्येक बुथको रक्षा गर्छन् र जनतालाई भयरहित ढंगले मत खसाल्न मद्दत गर्छन् । अर्को पाँचजना सोसल मिडिया हेर्ने टोली स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्दैर्छांै । यसअघिको स्थानीय तह चुनावमा हामीले त्यसमा ध्यान दिन सकेनौं । यसपटकदेखि गर्छांै । सोसल मिडिया हेर्ने टोलीले नेपाली कांग्रेसको प्रचार प्रसार गर्ने र कम्युनिस्टहरूको तानाशाही प्रवृत्तिलाई तोड्ने काम गर्छ । यो काम शनिबारदेखि सुरु भइसकेको छ ।
० तरुण कार्यकर्ता परिचालन हँुदैछन् ?
– हामीले प्रत्येक बुथमा ३० जना परिचालन गर्दैछांै । यसैगरी ३५ जना सोसल मिडिया हेर्ने टोली परिलचान गर्छौ । देशभर १० देखि १२ लाख तरुण कार्यकर्ता परिचालन हुँदैछन् ।
० पूर्णकालीन तरुण कार्यकर्ता कति छन् ?
– हामीसँग भएका सबै साथीलाई यो चुनावमा परिचालन गर्छौ । तरुण दलसँग आठ दस लाखको सख्यामा पूर्णकालीन साथीहरू छन् ।
० तर अहिलेसम्म तरुण दलको केन्द्रीय समिति बनेको छैन, तपाईहरू चारजना मात्र हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि एकजनाले टिकट पाएर प्रचारमा जानु भा छ । कसरी परिचालन गर्नु हुन्छ ?
– तपाईले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो । शुक्रबार तरुण दलको ६४औं स्थापना दिवसमा पनि मैले भनेको हुँ । ‘आठ महिना भयो, केन्द्रीय समिति बनेको छैन । केन्द्रीय समिति बनाउने अधिकार मलाई दिइएकोे छैन,’ मैले नेताहरूलाई भनेको हुँ । अधिवेशनले नै केन्द्रीय समिति बनाउने म्यान्डेट निर्देशन समितिलाई दिएको छ । निर्देशन समितिले पार्टी सभापतिसँग सल्लाह गरेर बनाउने हो । पार्टी सभापतिले वरिष्ठ नेताहरूसँग सल्लाह गरेर बनाउने हो । केन्द्रीय समिति बनाउन मैले नेताहरूलाई बारम्बार भन्दै आएको छु । रामचन्द्र दाइ, महामन्त्रीलगायतका धेरै नेतालाई भन्दै आएको छु । यो चुनावपछि बनाउँछौ भन्नुभएको छ ।
केन्द्रिय समिति नबन्दा संगठन गर्न धेरै गाह्रो भएको छ । केन्द्रमा हामी चारजना मात्र छौं । तीमध्ये एकजनाले टिकट पाइसक्नुभएको छ । अरु दुईजना साथी टिकटको दाबेदार हुनुहन्छ । त्यसैले काम गर्न कठिन छ । दैनिक १७÷१८ घन्टा काम गर्नुपर्ने समय हो यो । केन्द्रीय समिति पूर्ण नभए पनि जिल्ला, क्षेत्रहरू पूर्ण छन् । हाम्रो संरचना क्षेत्र, गाँउ टोलमा छ । जसरी कांग्रेसको संगठन गाउँदेखि केन्द्रसम्म छ, त्यसैगरी तरुण दलको पनि संगठन छ । त्यो संरचनाबाट तरुण साथीहरू परिचालित गर्ने कुरामा या आदेश र निर्देशन दिने कुरामा साथीहरूले मान्नुभएको छ । त्यहीअनुसार परिचालित हुन्छ ।
० विधानले केन्द्रीय समिति विस्तारको अधिकार दिएको छैन ?
– महाधिवेशनस्थलबाट महाधिवशन उद्घाटन भयो, तर बन्दसत्रबाटै केन्द्रीय समिति बनाउने अधिकार निर्देशन समितिलाई दिइयो । बनाउने त मैले नै हो । यसमा दुई मत भएन, तर निर्देशन समितिले दिएको लिस्टमा बनाउने भन्ने कुरा हो । यो अधिकार महाधिवेशनले निर्देशन समितिलाई दिएको हो । विधानभन्दा पनि ठूलो महाधिवेशन भयो । विधान संशोधन गर्ने, विधान लेख्ने काम महाधिवेशनले गर्छ ।
० भनेपछि तपाईले बनाउन चाहेर पनि केन्द्रीय समिति बनाउन सक्नुभएको छैन, होइन ?
– हो, मैले बनाउन चाहेर पनि बनाउन सकेको छैन । नेताहरूले ‘गो हेड’ भनेका छैनन् । नेताहरूले यो चुनावको बेला केन्द्रीय समिति नबनाऔ । साथीभाइहरूबीच मनमुटाव हुन्छ भन्ने कुरा गरे । हामी पार्टीका कार्यकर्ता पनि हांै, नेताहरूले भनेको कुरा मान्नै प-यो । तरुण दल भनेको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन हो । हामी कुनै एनजिओ, आइएनजीओ जस्तो स्वतन्त रूपले अघि बढ्न सक्दैनौ । पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ, त्यो निर्देशन हामीले मान्नुपर्छ ।
० आठ महिनापछि पहिलोपटक गत शुक्रबार कार्यक्रम गर्नुभयो, किन यस्तो निष्क्रिय ?
– निक्रिय भएको होइन । मैले नेताहलाई जबसम्म तपाईहरूले केन्द्रमा समिति दिनु हुन्न, मैले कार्यक्रम गर्दिनँ भनेर अडान लिएर बसेको थिएँ । महाधिवेशनबाट फर्केर काठमाडौं आएपछि हाम्रो सपथ कार्यक्रम नै करिब करिब दुई महिनापछि भयो । त्यो बेला मैले नेताहरूलाई जबसम्म मेरो सपथ ग्रहण हुँदैन, त्यसबेलासम्म केन्द्रीय समिति नै जान्न भनेको थिएँ । दुई महिनासम्म म केन्द्रीय कार्यालय नै गइनँ । विधानअनुसार सपथग्रहण गरेपछि काम गर्न पाइन्छ । म केन्द्रीय कार्यालयमै नगएपछि सपथग्रहण गराउन नेताहरूलाई दबाब भयो । केन्द्रीय समिति नबनाउँदासम्म देशव्यापी रूपमका तरुण साथीहरू परिचालन गर्छु, जिल्ला जिल्ला र क्षेत्रका कार्यक्रम गर्छु, तर केन्द्रमा कार्यक्रम गर्दिनँ भनेको थिएँ, तर शुक्रवार तरुण दलको स्थापन दिवस नै प¥यो । तरुण दल जन्मेको दिन भयो । त्यसैले शुक्रबार कार्यक्रम गर्नु मेरो बाध्यता थियो । कार्यक्रम अत्यन्त सफल भयो, त्यसले साथीहरूमा उत्साह ल्याएको छ ।
० फेरि केन्द्रमा यस्ता कार्यक्रम गर्नु हुन्छ ?
– कार्यक्रम गर्न हिजो (शुक्रबार) देखि सुरु भइसक्यो । नेताहरूले मलाई चुनावपछि केन्द्रीय समिति दिन्छु भनेर बचन दिनुभएको छ । चुनावलगत्तै केन्द्रीय समिति बनाउँछौ भन्ने आश्वासन दिनुभएकाले कार्यक्रमहरू लगातार हुन्छन् ।
० चुनावमा कस्ता कार्यक्रम गर्नु हुन्छ ?
– चुनावमा परिचालन गर्न हामीले प्रत्येक जिल्ला र क्षेत्रलाई निर्देशन दिइसकेका छौ । तरुण दललाई सभा गर्ने, सम्मेलन गर्ने, आमभसा गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौ । यसैगरी रुख चिन्ह लिएर आएको कुनै पनि नेतालाई तेरो र मेरो नभनी प्रचार प्रसार र सहयोग गर्ने, कसैले अन्तर्घात गर्न लागेका थाहा भयो भने त्यसलाई सचेत गराउन हामीले जिल्ला जिल्ला र क्षेत्रलाई निर्देशन दिएका छौ । अहिले हाम्रो लडाइँ कम्युनिस्टहरूसँग छ । यो लडाइँ लड्न तरुण दलका साथीहरू तयार हुनुहुन्छ । दिमागको हिसाबले या बौद्धिक हिसाबले पनि हामी तयार छौं । उनीहरूले बल नै प्रयोग गर्न खोज्छन् भने हामी पनि त्यसमा तयार छांै । उनीहरू हामीसँग झैझगडा गर्न आउँछन् भने हामी त्यसमा पनि तयार छौं । लोकतन्त्र बचाउन हामी जीवनकै आहुति दिन तयार भएर बसेका छौ । त्यो निर्देशन हामीले जिल्ला जिला र क्षेत्रमा जारी गरेका छौं ।
० एमालेको युवा संघ र माओवादीको वाईसीएल यसपटक मिलेर जाने भएका छन्, यिनिहरूको मुकाविला गर्न सक्नु हुन्छ ?
– किन मुकाबिला गर्न सक्दैनौ ? संसारभरबाट हराएका कम्युनिस्टहरूको मुकाबिला गर्ने आधार हामीसँग छ, तागत पनि छ । हामी युवाहरू लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफे जीवन दिन तयार भएर बसेका छौं । योे कम्युनिस्ट गठबन्धन होइन, कमाउनिस्टहरूको गठबन्धन हो । वाममोर्चा होइन, दाम मोर्चा हो । दाम कमाउन यिनीहरूको गठबन्धन भएको हो । कम्युनिस्टहरूले यो देशका लागि के योगदान गरेका छन् हँ ? संविधान नेपाली कांगे्रसले बनाएको हो । त्यो पनि एकपटक होइन, दुईपटक बनाएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको पनि नेपाली कांग्रेसले हो । त्यो पनि सडकबाट, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट ल्याएको हो । कांग्रसले २०४६ सालको आन्दोलन ग¥यो । किशुनजीले संविधान बनाउनुभयो । सुशील कोइरालाले ०७२ मा गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनाउनुभयो । यिनी कम्युनिस्टहरूले के काम गरेका छ ? मान्छे मार्ने, काट्ने, भौतिक संरचना भत्काउने काम गरेका छन् । उनीहरूले देशका लागि के योगदा गरेका छन् ? केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले के काम गरे ? ठूलो कुरा गरेर हुन्छ ? जनतालाई भ्रम पारेर हुन्छ ? सोसल मिडियामा जनतालाई भ्रम पारेर हुन्छ ? सोसल मिडियामा विदेशीलाई लेखाउन लगाएर हुन्छ ? त्यसैले संसारबाट कम्युनिस्ट हराइसकेको छन् । उनीहरूले एकतन्त्रीय तानाशाही व्यवस्था ल्याउन खोजेका छन् । त्यसलाई रोक्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यो लडाइँ लोकतन्त्र पक्षधर र एकतन्त्रीय तानाशाही पक्षधरबीचको हो । लोकतान्त्रिक संविधान जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने जनमतसंग्रह पनि हो यो । हामी हार्नेवित्तिकै संविधान संशोधन गरेर नेपालमा लोकतन्त्र सिध्याउने योजना बन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउन लोकतन्त्र पक्षधर विजयी हुनु आवश्यक छ ।
जंगलबाट आएका माओवादीलाई गिरिजाबाबुले संसद्मा ८४ सिट दिनुभयो । यसको मतलब हामीले सरेन्डर गरेका होइनौं । उनीहरूलाई कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउन त्यसो गरेका होइनौं । देशामा शान्ति हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ, नेपाली जनताको बीचमा लडाइँ हुँदैन, जनता मार्न छाड्छन्, समृद्ध नेपाल हुन्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई संसद्मा ल्याएका हौं । उनीहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा बस्छन् भनेर ल्याएका हांै । तर उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतलाई नै ध्वस्त बनाउने र कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापन गर्न हामीले उनीहरूलाई जंगलबाट ल्याएका होइनौ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न तरुण दल तयार छ । लोकतन्त्रका लागि उनीहरूले उठाएको हतियार हामीले उठाउनु नपरोस् । हामी यही भन्छौं ।
० पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेर कांग्रेस चुनाव लडदै छ, मण्डले प्रवृत्तिको राप्रपासँग सहकार्य गर्न आवश्यक थियो ?
– कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने पार्टी हो । कम्युनिस्टहरूको एकता भएपछि कम्युनिस्ट विरोधीलाई लिनु कांग्रेसको बाध्यता हो । हिजो सहरमा राजाको बन्दुक थियो भने गाउँमा माओवादीको बन्दुक थियो, तैपनि कांग्रेस सिद्धिएन र कसैसँग डराएन । त्यसैले कम्युनिस्टहरूसँग डराएर यो तालमेल भएको होइन । तर कम्युनिस्टहरूबीच एकता भएपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्युनिस्ट विरोधीहरूको एलाइन्स बनोस्, त्यसको नेतृत्व कांगे्रसले गरोस् भन्ने रह्यो । यसको फाइदा बेफाइदाभन्दा पनि कम्युनिस्ट भर्सेज डेमोक्रेसी एलाइन्समा जानुपर्छ भन्ने मान्यता भयो ।
० कांग्रेसले यसपटक कति सिट ल्याउला, तपाईको विश्लेषण कस्तो छ ?
– डेमोक्रेटिक एलाइन्सले बहुमत ल्याउँछ ।
कांग्रेसलाई जिताउन चुनाव लडिनँ
० तपाई राजनीतिमा किन लाग्नु भएको हो ?
– अरु किन राजनीतिमा लागे ? त्यो मलाई थाहा छैन, तर म यो देशको सेवा गर्न राजनीतिमा लागेको हुँ । देशको सेवा गर्न राजनीति सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो । देशको मुहार फेर्न राजनीतिमा आएको हुँ । म स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छु । म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छु । राजनीतिबाट मलाई मागी खानुपर्दैन । राजनीति गरेर कमाउनु पनि छैन । इमान्दारीपूर्वक राजनीति गर्छ‘ । यो देशलाई धनी बनाउन म राजनीति आएको हुँ ।
० अहिलेको राजनीतिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
– छैन । अहिले सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ । देशको सबै अंगमा भ्रष्टाचार छ । कम्युनिस्टहरू अगाडि आउनुमा भ्रष्टचार पनि एउटा कारण हो । संवैधानिक अंगदेखि सबै ठाउँमा पैसाको खेल छ । पैसाको खेललाई नरोकेसम्म हामीले समृद्ध नेपाल बनाउन सक्दैनौ ।
० टिकट बाँड्न पनि पैसाको खेल भएको छ भन्छन् नि ?
– अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । त्यस्तो देखिएमा तरुण दलले सशक्त आवाज उठाउँछ र प्रतिकार पनि गर्छ ।
० तपाई कहिलेदेखि राजनीतिमा लाग्नुभएको हो ?
–२०४६ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा छु । नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरु गरेको हुँ । पढाइको सन्दर्भमा दिल्ली गएँ । त्यसपछि काठमाडौं आए । २०५३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु सदस्य भएँ । २०५५ सालमा एकाइ सचिव, २०५७ सालमा त्रिवि समितिको अध्यक्ष भएँ । त्यसपछि २०६२ देखि २०६५ सालसम्म नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री भएँ । महामन्त्रीबाट नेविसंघको अध्यक्षको दाबेदार थिएँ । तरुण दलमा आउने मेरो विचार थिएन, तर पार्टी नेताहरूले तिमीले नै तरुण दल चलाउनुपर्छ, तरुण दल दललाई ऊर्जा देऊ भन्नुभयो । तिमीसँग शक्ति छ, इमान्दार छांै अगाडि भने । र, म तरुण दलमा आएँ । म इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु । संगठनलाई मागी खाने भाँडो बनाउँदिन । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।
० यसपटक तपाई किन निर्वाचनमा उठ्नु भएन ?
– मलाई जिल्लाबाट पनि सिफारिस भएको थियो । ललितपुरका साथीहरूले आऊ भन्नुभएको थियो । नेताहरूले पनि तिमी लड भने, तर संगठन बनाउन म चुनावमा लडिनँ । म ठूलो संगठनको अध्यक्ष बन्न खोजेको हुँ । पार्टी ठूलो भएपछि भ्रातृसंगठन पनि ठूलो हुन्छ । पार्टी सानो भए भ्रातृसंगठन पनि सानो हुन्छ । मैले ठूलो पार्टी बनाउन खोजेको हुँ । मेरो समिति पनि पूर्ण नभएकाले पनि म उम्मेदवार बन्न नचाहेको हो । सकेसम्म ७५ जिल्लामा, त्यो सम्भव नभए ६५ जिल्ला पुग्छु । त्यहाँ आमसभा गर्छु ।
० राजनीतिमा तपाईको आकांक्षा के छ ?
– राजनीति गरेपछि फस्टमेन बन्ने आकांक्षा स्वाभाविक हुन्छ । जोगी बन्न राजनीति गरिँदैन । प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति बन्ने स्वाभाविक आकांक्षा हुन्छ । राजनीतिमा लागेका तल्ला तहदेखि माथिल्लो निकायका सबैलाई सोध्नुहोस्, सबैको आकांक्षा यही हुन्छ । इमान्दारिताका साथ यो देशमा काम गर्ने मेरो इच्छा छ । जितजंग इमान्दार मान्छे हो भनेर म आफूलाई चिनाउन चाहन्छु ।
Tarun Khabar0response सोमबार,१३ कार्तिक २०७४ 7952 Views